शकुन्तलाको झड्काले गायब भएका राजेश हमालको यस्तो छ ‘कम ब्याक’ योजना
भारतीय चलचित्र इतिहासका सबैभन्दा लोकप्रिय अभिनेता को हुन् ? चलचित्र क्षेत्रलाई सर्वोच्च स्थानमा पुर्‍याउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान कसको छ ?
बलिउड चलचित्रबारे सामान्य ज्ञान भएकालाई समेत यसको उत्तर सहजै आउँछ – अमिताभ बच्चन । ५० वर्षदेखि निरन्तर बलिउडमा राज गरिरहेका छन् उनले । दर्जनौं हिट चलचित्र दिएका छन्, करोडौं शुभेच्छुक कमाएका छन् । जनजिब्रोमा महानायकको उपाधि पाएका अमिताभलाई सामान्य ज्वरो आउँदा पनि हजारौं शुभेच्छुकहरू मुम्बईस्थित उनको घर ‘जल्सा’ अघि भेला हुन्छन् ।
उनलाई कहिल्यै चलचित्रको कमी थिएन । आफू अभिनित चलचित्र कहिले ‘हिट’ त कहिले ‘फ्लप’ भइरहेका थिए । तर समय यस्तो पनि आयो – उनी अभिनित अधिकांश चलचित्र ‘फ्लप’ हुन थाले । यो शृंखला लामै समय रह्यो ।
अब के गर्ने ? अमिताभ असाध्यै दोधारमा परे । घरपरिवारको सल्लाह लिन खोजे । केही नजिकका इष्टमित्रको सहयोगमा निर्णय लिन खोजे । तर कसैले उनलाई चित्त बुझ्ने निर्णय दिन सकेनन् ।
सन् १९९२ मा चलचित्र ‘खुदा गवाह’ र त्यसअघिका केही चलचित्रको असफलतापछि अमिताभले चलचित्र उद्योगबाट एकाएक विश्राम लिए । त्यसपछि अध्ययन र घुमफिरमा व्यस्त भए । चलचित्र उद्योगका गतिविधिमा समेत संलग्न भएनन् । अमिताभका ‘फ्यान’ तथा शुभेच्छुकले चलचित्र उद्योगमा फर्काउन निकै प्रयास गरे तर उनी लामै समय गायब भए ।
तर १९९६ मा उनले आफ्नै ब्यानर ‘एबीसीएल’बाट चलचित्र ‘तेरे मेरे सपने’ निर्माण गरे । यो चलचित्र निकै चल्यो । अमिताभलाई ५ वर्षदेखि कुरिरहेका दर्शकको प्रतिक्षालाई चलचित्रले सार्थक तुल्याइदियो । अर्को वर्ष १९९७ मै निर्माण गरेको चलचित्र ‘मृत्युदाता’ले ‘तेरे मेरे’भन्दा दोब्बर आम्दानी गर्‍यो । अमिताभको ‘स्टारडम’ थप मजबुत बनाइदियो । अमिताभले एक भारतीय मिडियासँग बलिउडबाट ५ वर्ष विश्राम लिएको सन्दर्भमा भनेका थिए, ‘त्यो समय विश्राम नलिएको भए मेरा अरु चलचित्र असफल भइरहन्थे । स्टारडम खस्कँदै पछारिनेवाला थियो ।’
त्यसबेलादेखि आजका दिनसम्म अमिताभले कहिल्यै पछि फर्किएर हेर्नुपरेको छैन । ७८ वर्षको उमेरमा पनि पहिलेजस्तै चलचित्रको छायांकनमा व्यस्त छन् उनी । आफ्ना नियमित कामहरू जारी राखेका छन् । उनी प्रस्तोता रहेको ‘कौन बनेगा करोडपति’ नियमित रूपमा प्रशारण भइरहेको छ ।
अमिताभको त्यो जीवन चर्चामा लामै समय गफिएपछि नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालले भने, ‘अमिताभले त्यो ५ वर्ष आफूलाई केही परिवर्तन गरेर आउनका लागि समय दिएका थिए । मैले पनि वर्तमान चलचित्रको समय र दर्शकको चाहनाअनुसार केही फरक तरिकाले आउनकै लागि आफैंलाई समय दिएको छु । चलचित्र उद्योगबाट हराएको होइन ।’ अमिताभजस्तै राजेश हमालले ५ वर्षसम्म कुनै पनि चलचित्रको साइन नगर्ने संकेत गरेका छन् ।
किन ? हमाल थप्छन्, ‘नयाँ विषय । दर्शकको चाहना । चलचित्र बजारको लयमा धेरै चेन्जिङ आएको छ । त्यो नबुझेर हचुवाको भरमा कुनै पनि चलचित्र साइन गर्दिनँ ।’ त्यसो त हमालकै माग अनुसारको पारिश्रमिक दिने वाचासहित केही समयअघि चलचित्र ‘प्रेम गीत ३’ टीमले मुख्य भूमिकामा काम गराउन निकै कसरत गर्‍यो । त्यसपछि र अघि पनि दर्जनौं चलचित्रको स्क्रिप्ट पढिसकेका छन् हमालले । तर न प्रेम गीत, न अन्य कुनै चलचित्रमा काम गर्न राजी भए उनी ।
हमालले लगभग ४ वर्ष चलचित्र उद्योगबाट विश्राम लिएका छन् । उननी योजनाअनुसार अरु १ वर्ष कुनै पनि चलचित्रमा देखिने छैनन् । तर यो १ वर्षपछि ‘होम प्रोडक्सन’बाट निर्माण हुने चलचित्रबाट अथवा अरु कुनै उत्कृष्ट विषयमा निर्माण हुने चलचित्रसँगै फिल्मी उद्योगमा ‘कम ब्याक’ हुने पक्कापक्की जस्तै छ । ‘होम प्रोडक्सनबाट निर्माण गर्ने चलचित्रको स्क्रिप्टको काम भइरहेको छ,’ हमाल थप्छन्, ‘तर कुन चलचित्रबाट फेरि अभिनय थाल्छु, निर्णय गरिसकेको छैन ।’
कतिपयले चलचित्र नपाएर हमालले अभिनयमा फर्किन नसकेको दाबी गर्छन् । कतिपयले निर्माता–निर्देशकले पत्याएनन्, काम पाएनन् भनिदिन्छन् । कतिपयले हमालको उमेर ढल्कियो, दर्शकले रुचाएनन् भन्छन् । तर कुरो त्यसो नभएको हमाल बताउँछन् ।
युगदेखि युगसम्मबाट चलचित्र यात्रा थालेका हमालले त्यसपछि वसन्ती, चाँदनी, गाउँले, परदेशी कान्छा, ढुकढुकी, सन्तानको माया, हामी तीन भाइ, बाटुली, देउता, धर्मा, शंकर, ज्वाला, सुख दुःख लगायत निरन्तर ‘हिट’ चलचित्र दिइरहेका थिए । २०७३ सालसम्म उनी अत्यन्तै व्यस्त भए । तर ४ वर्षदेखि नेपाली चलचित्रका दर्शकले हमालको अभिनय रहेको नयाँ चलचित्र स्क्रिनमा हेर्न पाएका छैनन् ।
अभिनेता हमाल आफैंका लागि २ महत्त्वाकांक्षी चलचित्र थिए, बाग्मती र शकुन्तला । २०७३ सालको भदौ १० गते प्रदर्शनमा आएको चलचित्र शकुन्तला र २०७२ पुसमा प्रदर्शन भएको बाग्मतीको असफलतासँगै हमालले आफ्नो चलचित्रको यात्रा एकाएक रोकेका हुन् । यी दुवै चलचित्रको असफलताले उनलाई झड्का नै दियो ।
‘मलाई दर्शकले यो क्षेत्रमा अड्काइराख्ने, विभिन्न परिस्थितिको बाबजुद पनि जस्तोसुकै चुनौती आए पनि यो क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिएका छन्, सोही कारण पनि चलचित्र क्षेत्र मैले कहिल्यै छोड्न सक्दिनँ,’ अभिनेता हमाल भन्छन्, ‘राष्ट्रको राजनीति, सामाजिक परिवेशले धेरै व्यक्तिलाई असुरक्षित महसूस गराएको छ । धेरै कलाकार विदेश पलायन हुनुभयो । तर मैले जीवनमा कहिल्यै हार मानेको छैन । सबै प्रेरणाको स्रोत दर्शक नै ह्ुनुहुन्छ । म केही परिवर्तित भएर आउन विश्राम लिएको हुँ, अभिनय यात्रामा पूर्णविराम लगाएको होइन ।’
मानिसको जीवन समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ । मानिसका चाहना पनि समय परिस्थितिले निर्धारण गर्छ । हमालले थपे, ‘म आफ्नो जीवन र करिअरलाई लिएर नयाँ मोडमा उभिएको छु । जीवनमा जे गरें, त्यो राम्रो/नराम्रो आफ्नो हातमा छ । विगतको पानामा छ । अब अगाडिको इतिहास बनाउनु छ । गरिराखेको कामलाई अलिकति फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्न मन छ ।’ आफूले कलाकारिताबाटै सबथोक पाएकाले चलचित्र क्षेत्रबाट कहिल्यै टाढा हुने र पलायन हुने सोच नआएको हमाल बताउँछन् ।
को बन्छ करोडपति, विभिन्न मेला महोत्सव, म्युजिक भिडियो, विभिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम र भेटघाटमा व्यस्त रहने हमाल आफैंलाई दर्शक तथा शुभचिन्तकबाट निकै दबाब आइरहेको छ – अब चलचित्रको काम थाल्न्ुपर्छ । दर्शकको दबाबलाई उनले विभिन्न तर्क राखेर पन्छ्याउने गरेका छन् । हमाल भन्छन्, ‘वास्तवमा दर्शकले मलाई नयाँ भूमिका, नयाँ विषयसँगै अझ उत्कृष्ट प्रस्तुतिमा देख्न खोज्नुभएको छ । म दर्शकको प्रतिक्षाको घडी धेरै लामो बनाउन चाहन्न ।’
कोरोना अर्थात् कोभिड १९ का कारण अझै २ वर्षजति चलचित्र उद्योग चलायमान हुन नसक्ने हमालको अनुमान छ । सोही कारण हतारमै चलचित्र साइन नगर्ने अडानमा छन् उनी । ‘खासमा म कलाकार नै हो, विभिन्न किसिमको पात्र र भावनामार्फत दर्शकलाई इन्टरटेन गराउने एकदमै प्रतिक्षामा छु । अहिले नयाँ मोडमा उभिएको छु । समयको माग, मेरो परिस्थितिको माग पनि त्यही हो । अब छिट्टै चलचित्रमा फर्किनेछु,’ उनले भने ।
हमाल पत्नी भन्छिन्, ‘शंकर छिट्टै हे ... भन्नेवाला छ’
महानायकका धेरै ‘हिट डायलग’मध्ये एउटा हो – शंकर हुँ म शंकर । अनि हे ... । हमाल पत्नी मधु भन्छिन्, ‘शंकर छिट्टै हे ... भन्दै हलमा आउनेवाला छ ।’ मधुले राजेश हमाल छिट्टै चलचित्रमा फर्किने संकेत गरेकी छन् । हमालसँगै गफिने क्रममा उनले भनिन्, ‘यतिका वर्षसम्म चलचित्र उद्योगमा निरन्तर काम गर्नुभयो । सायद दर्शकको मायाकै कारण त थियो । दर्शकको मायामा कहिल्यै कमी नभएकाले पनि उहाँ छिट्टै फर्किनुपर्छ ।’
मधु राजेशसँगै स्वदेश, विदेश र भेटघाटमा जाने गरेकी छन् । उनी थप्छिन्, ‘चलचित्रका स्क्रिप्ट एकदमै धेरै छन् । राम्रो प्रोजेक्टको विषयमा कुरा भइराखेको छ । मैले पनि आम दर्शकजस्तै उहाँलाई अभिनयमा छिट्टै फर्किएको देख्न चाहेकी छु ।’
उता अमिताभ, यताका हमाल
चलचित्र क्षेत्रबाट हराउँदा पनि चर्चा । काम गरे पनि चर्चा । चलचित्रमा काम नगर्दा पनि उत्तिकै व्यस्तता । भारतमा महानायकको उपाधि पाएका अमिताभ र नेपालका राजेश हमालको दिनचर्या उस्ताउस्तै छ । एकदमै कम विवादमा आउने राजेश हमाल जस्तै अमिताभ पनि खासै कहिल्यै विवादमा आएको देखिएको छैन । आम नागरिकदेखि उपल्लो तहका व्यक्तिले समेत रुचाउँछन् महानायकलाई । ६ महिनाअघि भारतीय चर्चित मिडिया आजतकले लामो स्टोरी कभरेज गर्दैै महानायक राजेश हमाललाई अमिताभसँग दाँजेपछि हमालको चर्चा भारतमा समेत व्यापक रूपमा फैलिएको थियो ।
पढे–लेखेका, अग्लो कद, मिडियाका जस्तोसुकै प्रश्नको पनि सहज तरिकाले जवाफ दिन सक्ने सामर्थ्य राख्ने, कमै मात्रामा विवादमा मुछिने लगायतका कारण पनि हमाल र अमिताभलाई तुलना गर्ने गरिएको छ ।
नेपाली ‘टिकटक स्टार’ प्रतिस्पर्धा गराइँदै, विजेताला...
पति विराट कोहलीको हौसला बढाउन रातो कपडामा देखिइ...